Ebe mara mma na ndịda Spain: Andalusia | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Spain obodo
Andalusia bụ mpaghara kachasị na Spain. Akụkụ a dị ukwuu nke ndịda nke peninshula ahụ na-ezobe ezigbo ọrụ ebube kwesiri ọ bụghị naanị ịhụ kamakwa ịnọnyere ma biri na ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ebe ndị mara mma anyị họpụtara maka isiokwu a sitere n’obodo ukwu a, nọrọ n’etiti anyị ka ikpori akwụkwọ a. Anyị na-ekwe gị nkwa na ị gaghị ahapụ ahịrị ndị a na-ebughi ụzọ banye Andalusia ugbu a.
1 Ezi ihe banyere Andalusia ...
2 Ebe anyị họọrọ na Andalusia
Ezi ihe banyere Andalusia ...
Andalusia, dika ndi ozo ndi ozo, ma obu dika ebe ozo n’uwa, n’agha nwere otutu ihe oma, ya na ndi ozo ojoo ... N’agbanyeghi, anyi no ebe a ikpo gi na Andalusia, ya mere na ọ na-amasị gị ịga leta ya, iji kwado ebe a mara mma n'ebe ndịda nke mba anyị.
Don't maghị ihe bụ isi ihe na-akwado Andalusia? Ọ dị mma, closeaa ntị nke ọma, n'ihi na n'okpuru anyị na-egosi naanị ole na ole n'ime ọtụtụ:
Obiọma na ịdị nso nke ndị bi na ya. Na Andalusia, ọ dị obere ka ị gakwuru mmadụ n'okporo ámá ya ma ha ejighị obi ọma, ịbịaru nso na adọrọ adọrọ. Ọ bụrụ na anyị ndị Andalusian na-etu ọnụ maka ihe ọ bụla, ọ bụ na anyị na-agakwuru ndị na-arịọ ya.
Ezigbo ihu igwe ihe karịrị ọnwa 9 kwa afọ. Ọ bụ ezie na na Spain ndị ọzọ, a na-ekwenyekarị na na ndịda ọ dịghị oyi ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ dị oke oke, ọ dịghị ihe ị ga-ahụ ma ọ dịkarịa ala n'afọ ndị na-adịbeghị anya. N'ọtụtụ akụkụ ndịda, ọ na-eru -2 ma ọ bụ -3 ogo na ụbọchị ụfọdụ n'oge oyi, mana ọ bụ eziokwu na ha kapịrị ọnụ ụbọchị akọwapụtara. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụ ụtọ ihu igwe dị mma, anwụ na ihu igwe dị mma n'ozuzu ya, ị ga-enwe mmasị n'ebe ndịda ma ọ ga-iyi nnabata kachasị mma.
Sierra ye inyan̄. Ọ bụrụ n’ị bụ otu n’ime ndị, dị ka m, achọghị ịhọrọ n’etiti osimiri na ugwu n’ihi na ha abụọ chọrọ, na Andalusia ị ga-ahụ atụmatụ abụọ ahụ. I nwere ọtụtụ narị kilomita n'ụsọ oké osimiri na ugwu ugwu dị ebube, ị ga-enwe ike ịgbapụ site n'otu ebe ruo ebe ọzọ n'oge dị mkpirikpi na obere ụzọ.
Ebe anyị họọrọ na Andalusia
Họrọ ebe mara mma 10 na Andalusia bụ ọrụ siri ike, mana anyị ga-eme ike anyị niile iji kwado ihe kacha mma nke obodo a kwụụrụ onwe ya:
Cabo de Gata Natural Park, na Níjar (Almería): Ọ bụ ezigbo ebe maka ndị na-achọ ịbịakwute ihe okike ma nwee oge ịnọrọ onwe ha.
Pọmigranet: O doro anya na ọ bụ otu n’ime obodo mara mma na Andalusia na Spain n’ozuzu ya. O nwere amara, o nwere ima nma, o nwere ugwu ugwu ya na ugwu Sierra Nevada ya, ma n’aka nke ozo, o nwekwara oke osimiri.
Edabeda, na Jaén: A obodo nke ị ga-ahụ oké Renaissance motifs na ọtụtụ nke ya ụlọ ma ọ bụrụ na ihe na-amasị gị bụ ịkwaga obodo na-ahụ ebube nke mmadụ mere architectures. Unesco kwupụtara Úbeda, bụ Cultural Heritage of Humanity na July 3, 2003.
Mónsul osimiri, na Almería: Osimiri a ahọrọla ọtụtụ dị ka osimiri kachasị mma na Andalusia.
Torcal de Antequera Natural Park, na Malaga: A dị iche iche odida obodo na anya dị ka a ọkpụkpụ ihe ngosi nka karịa eke ọnọdụ.
Sierra de Hornachuelos Natural Park, na Córdoba: Ọtụtụ ndị ornithologists si na Spain niile na akụkụ ụwa na-abịa ogige a sitere n'okike na-achọ ugo na udele ojii ojii.
Seville: Obodo nka, ahuhu na omenaala Andalusia. Obodo nwere ọtụtụ ihe igosi ụwa na ebe enwere menu oge dị ukwuu nke mmemme na omume ntụrụndụ.
Conil de la Frontera, na Cádiz: N'oge na-adịbeghị anya, obodo a Cadiz abụrụla ebe ndị ntorobịa si na Spain niile họọrọ maka ememme ọkọchị. Ihe kacha mma nke saịtị ahụ bụ enweghị oke osimiri ya dị egwu n'oge ọkọchị, juputara na ndị mmadụ mgbe niile.
Sierras de Cazorla, Segura na Las Villas Natural Park, na Jaén: Otu ọmarịcha oke ọhịa, nsụda mmiri, ugwu na osimiri ebe anyị nwere ike ịhụ oke ahịhịa na ahịhịa na anụ ọhịa, ọkachasị mgbada na nkịta ọhịa.
Ogige Ntụrụndụ Doñana, na Huelva: Otu n'ime ebe kachasị mma na Andalusia na Spain. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe okike na ala opupu gbara gị gburugburu, nke a bụ ogige gị. Ebe mara mma maka ndị hụrụ foto nke nwere ike ịnụ ụtọ ọdịda anyanwụ ya na ntụgharị uche ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ebe mara mma na ndịda Spain: Andalusia
Tropea, ọla ndị Italiantali